Fitsaboana ny covid-19 - Marary sivy amby telopolo sy dimanjato sitrana tany an-tranony • AoRaha
Tarehimarika ambony indrindra, sady mahavelompanantenana tanteraka na dia tena mbola ao anatin’ny ady amin’ny valanaretina Covid-19 aza isika, no navoakan’ny Ivon-toerampibaikoana CCO, omaly. Olona efatra amby fitopolo sy dimanjato no nambara fa sitrana rehefa nanaraka fitsaboana.
Somary nanaitra ihany koa ny fanamafisana momba an’ireo marary sivy amby telopolo sy dimanjato, izay naharesy ny valanaretina nefa notsaboina tany antranony avokoa. Na izany aza, olona vaovao iraika amby zato no voamarina fa mitondra ny tsimok’aretin’ny Covid-19 indray. Tsy nisy ny maty, araka ny vaovao ofisialy, omaly.
Miramirana ny endriky ny profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle, mpitondra tenin’ny CCO, teo am-panononana an’ireo olona efatra amby fitopolo sy dimanjato sitrana, omaly. « Tsy voatery hodimandry mihitsy ny olona rehetra tsaboina amin’ity valanaretina ity », hoy izy. Nohamafisiny fa tsy nanana fahasarotana na nisehoana soritra aretina kosa ny ankamaroan’ireo olona ireo ka azo notsaboina tsara tany an-tokantrano.
Am-polony teto Antananarivo
Tsy teto Antananarivo ihany no nahitana an’izao fahombiazan’ny fitsaboana amin’ny valanaretina izao. Ho an’ireo sitrana tany amin’ny hopitaly, mahatratra dimy amby telopolo, dia tetsy amin’ny hopitaly Befelatanana ny valo; teny Andohatapenaka ny roa; fito teny Anosiala; efatra tany Antsirabe; tany Andrainjato Fianarantsoa ny roa; sivy tany Analanjirofo ary tany amin’ny faritra Atsinanana ny telo.
Am-perinasa tanteraka ny fikirakirana an’ilay fitaovam-pitiliana vaovao GeneXpert, ka nahazoana ny vokatra tamin’ireo tranga iraika amby zato vaovao ireo.
Eto amin’ny faritra Analamanga hatrany no tena ahitana olona vaovao nifindran’ny Covid-19 satria nahatratra enina amby sivifolo izy ireo. Tany amin’ny faritra Atsinanana ny roa ary telo tany amin’ny faritra Matsiatra Ambony (Fianarantsoa).
Nitombo roa ambin’ny folo kosa ireo olona marary mafy. Telo amby dimampolo ny isan’ireo misedra soritr’aretina mahery, omaly.
Fizarana sosialim-bahoaka Tokantrano telo arivo isan’andro hahazo fanampiana eny Atsimondrano
Toeram-pitsaboana sy fitiliana covid-19 – Manambana hampiato ny asany ireo mpiasa etsy Andohatapenaka
Fanabeazana katolika Mifindra kilasy avokoa ireo mpianatra
Fampindramam-bola sy krizy :: Orinasa an-jatony misitraka ny tetikasa Miarina
Fanjofana andavanandro :: Niakatra avo roa heny ny vidin’ny legioma sasany
Fihoaram-pefin’ny miaramila Maty voatifitra ilay lehilahy avy niady tamin’ny vadiny
Fikasana fitsaram-bahoaka Polisy nataon’ny andian’ olona hazalambo
Voina tany Mahajanga Zaza 7 taona novonoina sy nalevina an-tsokosoko